na admin pa 21-12-21
Weld neck flanges ndiyo inonyanya kufarirwa mhando yeflange ine mitsipa yekuwedzera ine weld bevel kumagumo. Rudzi urwu rweflange rwakagadzirirwa kusungira weld yakananga kune pombi kuti ipe yepamusoro uye yakasarudzika fomu yekubatanidza. Muhukuru hukuru uye makirasi ekumanikidza epamusoro, izvi zvinenge zvakasarudzika ...
Alloy steel Threaded Bushing, Stainless Steel Forged Bushing, SS forged Bushing ASTM A182 F304/304H, ASTM A182 F316/316L Forged Bushing , ASTM A182 F317L Forged Bushing, ASTM A182 F321 Forged Bushing, Dux1 ATM28 ASTM8 Forged Bushing, ASTM8 ATM28 ASTM8 F44/F45/F51 Forged Bushing, ASTM A182 F...
cC.Z.IT ine chekuita nekupa huwandu hwakapararira hwemafodhi ekudzikisa ma tee nemutengo unokwanisika. Isu tinopa aya Cross e muhukuru hwakasiyana, zvirevo, maumbirwo uye ukobvu. Muchinjikwa chigadziko chefodya chinoshandiswa kupatsanura uye kushandura mafambiro ekuyerera kwepombi ye90 degree. Zvakare, idzi dzidziso ...
na admin pa21-11-26
CZIT inotungamira kunze, mutengesi uye mugadziri weForged Pipe Nipples. Muto wepombi kureba kwepombi yakatwasuka pamwe neshinda dzechirume kumativi ese. Ndiyo imwe yemhando dzinonyanya kufarirwa dzepombi fittings, uye inobatanidza shinda kana yekubatanidza pamativi ese. Pipe nip...
AKAFIKIRWA THREADED CAPS
Irikukwira munyika yose pamwe chete nemisika yepasi rose, CZIT iri kuchengetedza mukurumbira wayo semutengesi wepamusoro-soro, mutengesi uye muparidzi weTHREADED CAPS .A Screwed Cap imhando yepipe fitting iyo inowanzova gasi yakasimba kana mvura. Basa rayo guru nderekuvhara kupera kwe ...
na admin pa 21-11-12
Forged Coupling, Stainless Steel Socket weld Full Coupling, Carbon Steel Forged Socket weld Half Coupling Stockiest, Alloy Steel Reducing Coupling, Monel Alloy Socket weld Coupling Suppliers. SS Forged Socket weld Coupling, Socket weld Coupling, Duplex Steel Forged Coupling, Super Duplex Simbi Saka...
KUFANIRA PAPI FITTINGS- SOCKET TEE
na admin pa 21-11-04
Forged Pipe fittings inopihwa mune dzakasiyana sarudzo senge gokora, bushing, tee, coupling, nipple uye mubatanidzwa. Inowanikwa muhukuru hwakasiyana, chimiro uye kirasi nezvinhu zvakasiyana seStainless simbi, duplex simbi, alloy simbi uye kabhoni simbi. CHIT ndiye mutengesi wepamusoro weTEE akagadzira f...
FORGED PIPE FITTINGS-ELBOW
Forged Pipe fittings inopihwa mune dzakasiyana sarudzo senge gokora, bushing, tee, coupling, nipple uye mubatanidzwa. Inowanikwa muhukuru hwakasiyana, chimiro uye kirasi nezvinhu zvakasiyana seStainless simbi, duplex simbi, alloy simbi uye kabhoni simbi. CZIT ndiye akanakisa mutengesi we90 Degree el...
Physical Specifications Chokutanga uye chinonyanya kukosha, flange inofanira kukodzera pombi kana midziyo iyo yakagadzirirwa. Mamiriro emuviri wepombi flanges anosanganisira zviyero uye magadzirirwo maumbirwo. Flange Dimensions Zvimiro zvemuviri zvinofanirwa kutsanangurwa kuti saizi maflange nemazvo. Kunze diamet...
PIPE FLANGES ZVINO
Mapaipi flange ari kuburikidza marimu, mipendero, mbabvu, kana makora anoshandiswa kugadzira chinongedzo pakati pepombi mbiri kana pakati pePIPE uye chero mhando yeFITTINGS kana chikamu chemidziyo. Mapaipi flange anoshandiswa kuputsa masisitimu epombi, kuisirwa kwenguva pfupi kana nharembozha, shanduko pakati pezvinhu zvakasiyana ...
YAKAMUSORO PPIPI FITTINGS-CZIT
na admin pa 21-09-29
Kana kambani yako ichida zvemhando yepamusoro, pombi ine mari uye chubhu magokora epurojekiti, tiripano kuti tikubatsire. CZIT inopa sarudzo yakakura kwazvo yemabhendi emasheya, kubva kuhupfumi hwakaumbwa magokora (ane musono) kune mandrel akabhenda magokora asina musono unooneka. Magokora edu anokura muhukuru kubva pa1 ”kusvika pa3-1/2” OD...
FORGED simbi GLOBE VALVE
Kune marudzi matatu ebhoneti dhizaini ye forged steel globe valve. Yekutanga ibhoneti yakabhaurirwa, yakagadzirwa nenzira iyi yesimbi yakagadzirwa nesimbi yeglobe valve, muviri wevharuvhu nebhoneti zvakabatana nemabhaudhi nenzungu, zvakanamwa nespiral ronda gasket (SS316 + graphite). Metal ring yekubatanidza...
1234 Next > >> Peji 1/4